TOOS: Wareegga 3-aad ee doorashada oo bilowday: Farmaajo vs Xasan Sheekh - Caasimada Online
Home Warar TOOS: Wareegga 3-aad ee doorashada oo bilowday: Farmaajo vs Xasan Sheekh
TOOS: Wareegga 3-aad ee doorashada oo bilowday: Farmaajo vs Xasan Sheekh
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa hadda la guda galay codeynta wareegga 3-aad ee doorashada Madaxweynaha Soomaaliya, waxaana isugu soo haray Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kadib loolan adag oo musharaxiin badan ay ku hareen.
Waxaa goordhow soo idlaaday tirinta wareegga labaad ee codadka doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo ka socota Teendhahda Afisyoone ee magaalada Muqdisho.
Wareegii labaad waxaa ku haray Saciid Cabdullaahi Deni oo helay 67-cod iyo Xasan Cali Kheyre oo helay 63-cod.
Guddoonka Golaha Shacabka Aadan Madoobe oo ku dhawaaqay natiijada codadkii wareegga labaad ayaa sheegay in Xasan Sheekh iyo Maxamed Farmaajo ay u dugbayaan wareegga 3-aad.
Farmaajo oo dad badan ay saadaalinayeen in wareegaan uu tanaasuli doono, sidii uu horay u sameeyey Xasan Sheekh ayaa soo qoray fariin uu ku cadeynayo in wareegga 3-aad uu tartami doono, sidoo kalena uu xildhibaanada uga codsanayo inay codkooda siiyaan.
Hoos ka daawo doorashada wareegga 3-aad oo Toos ah